Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlay dadka laga raafay Nairobi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlay dadka laga raafay Nairobi
Nairobi – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa magaalada Nairobi uga wada hadlay arrimo ay mid yihiin Soomaalida faraha badan ee maalmihii tegay laga raafayey xaafadda Islii ee magaaladaq Nairobi.
Danjire Maxamed Cali Ameeriko oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in la joojiyo howlgallada lagu qab-qabanayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi.
Wuxuu sidoo kale danjire Ameeriko sheegay in labada hogaamiye kju heshiiyeen in la sii daayo dadka sharciyada leh ee aan dambi loo heysan, islamarkaana kuwa aan sharciga ku joogin lagu wareejiyo dowladda Soomaaliya.
“Waxay ku heshiiyeen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya in dadkii maalmahan lagu soo qabqabtay howl-gallada ka socda Nairobi baaritaan lagu sameeyo, wixii sharci lehna la sii daayo, wixii sharci aan lahaynna lagu wareejiyo dowladda Soomaaliya,” ayuu yiri danjire Ameerika oo la hadlay VOA.
Dhinaca kale, waxaa weli xaafadda Islii ka socda qabqabashada Soomaalida, iyadoo dad boqolaal qof ah lagu hayo garoon kubadda lagu ciyaaro kadib markii uu qaadi waayey saldhig boolis oo Soomaalida iyo dadka kale ee Islii laga qabto lagu xiri jiray.
Howlgalka ka socda xaafadda Islii ayaa socon doona muddo bil ah sida uu sheegay sarkaal ka tirsan xafiiska xildhibaanka deegaanka Kamakuji ee Islii ka tirsan tahay, iyadoo ay howlgalka wadaan ilaa 6000 oo askari.
Taliyaha Booliska dalka Kenya, David Kimaiyo ayaa dhankiisa sheegay in howlgalka lagu xirxirayo dadka uu socon doono ilaa Kenya ka noqoto meel amaan aha sida uu yiri.
“Howlgalkan heerka qaran ah wuu sii socon doonaa illaa Kenya ka noqoto meel ammaan ah,” ayuu yiri taliyaha Booliska dalka Kenya David Kimaiyo.
Xaafadda Soomaalidu ku badantahay ee Islii ayaa maalmihii lasoo dhaafay haawaneysay, waxaana joogsaday inta badan ganacsiga iyo howlaha waxbarashada, iyadoo arrintaas ay ka dhalatay cabdi laga qabo ciidamada amaanka Kenya oo la dhigay waddo kasta oo ka mid ah xaafadda.